Marcus Hamberg ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များအတွက်မဆိုပါဝင်ပတ်သက်မှုငြင်းဆို | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 10 နိုဝင်ဘာလ, 2013 အားဖြင့် Holmbygden.se
(20/11: “Fagerhyltan ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များအတွက်အချို့သောပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့သည်။”
ဒါဟာ SVT မစ်ရှင်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Marcus Hamberg လိမ်ညာခြင်းနှင့်အချို့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် t.o.m ခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ထင်ရှားခဲ့သည်. ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များ၏အများစုပိုင်ရှင်. ဒီမှာပို Read. )
Marcus Hamberg နှင့်အတူတယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်မှတစ်ဆင့်ချင် HBU meddela ett faktafel på Holmbygden.se. Hamberg ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး Service ကိုခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အားလုံးသူမ၏နှင့် Fagerhyltans ပါဝင်ပတ်သက်မှုငြင်းဆို.
Marcus Hamberg Fagerhyltan AB ၏ CEO ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအကြီးတန်း Home နဲ့ဆရာရဲ့အိမ်ရာ Holmes ဝယ်ယူသောကုမ္ပဏီ 2011 Johan Stendahls ဒေဝါလီခံခြင်းဖြင့်.
Marcus Hamberg မကြာသေးမီကသတင်းစာအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် သူ့ကို & ငှားရန် Uppsala. သူဟာမကြာသေးမီကအပန်းဖြေ Holmes Tobo အပါအဝင်ဆွီဒင်အတွက်အများဆုံးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များမှ Tobo ၎င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုရောင်း.
မူလစာမျက်နှာထံမှ & Hyras artikel publicerades därefter på Holmbygden.se att Marcus Hamberg med företaget Fagerhyltan tillsammans med advokaten Michael Sterner var ägare av Aros Energideklarationer i inlägget “နောက်ထပ်နေရာများမှာမီးအောက်မှာထစွမ်းအင်ကြေညာချက်များ“.
Marcus Hamberg ထိုကြောင့်သို့မဟုတ် Fagerhyltan ထစွမ်းအင်လက်မှတ် AB မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်မရှင်းလင်းမယ်လို့သို့မဟုတ် Holmes အတွက်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နေရာထိုင်ခင်းအချို့လမ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်.